PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-01-01 - Zikuphatheleni izinkanyezi zakho ku-2017 wethemba?
Zikuphatheleni izinkanyezi zakho ku-2017 wethemba?
NJENGOBA uqala unyaka sikubhekela izinkanyezi ukuthi zizobe ziphetheni ngo-2017. Sibheka ukuthi unyaka wonke uzobe uzokuphatha kanjani empilweni, kwezothando, kwezezimali nokunye.
Sifake nosaziwayo ogubha nabo njalo uma uzalwa ngenyanga yakho. CAPRICON: Dec 22- Jan 21
KULO nyaka kuzoba nezinguquko eziningi. USathane uzokuvivinya ngezindlela eziningi kodwa okuhle wukuthi uzomehlula.
Udumo onalo luzokhula njengoba uzoqinisa ekunikeleleni abaswele nomphakathi wonkana. Ubudlelwane nesithandwa sakho uma ungabunikezi ithuba buzoba sengcupheni okungaze kufinyelele ekutheni nihlukane. AQUARIUS: Jan-21- Feb 20
LO nyaka uzofika noshintsho empilweni yakho njengoba uzoke ukwazi ukuzikhipha nabangani okuyinto ongayijwayele. Eminyakeni eminingi eyedlule ubulokhu usebenza kanzima, kulokhu umsebenzi uzokwehla. Kunamathuba amaningi okuthi ngasekupheleni konyaka ungase wenyuselwe esikhundleni. Ngakwezezimali kuzoqale kube nzima, kodwa lizosukuma ibhizinisi lakho.
Ngakwezothando, lo nyaka uza nezindaba ezinhle, kungenzeka ushade.
Ukwenyuselwa esikhundleni kungakudalela izinkinga othandweni ngenxa yokuthi kuzomele usebenze ngokuthe xaxa okuhambisana neholo lakho. PISCES: Feb 21- Mar 20
KULO nyaka uzothatha izinqumo eziphusile ngenxa yezinkolelo onazo kodwa kuzodingeka ukuthi ube nemali eningi. Abaphathi emsebenzini bazoyithakasela indlela osebenza ngayo. Ngesinye isikhathi uzoba nesikhwele okuzocasula umuntu othandana, ubuye ukhombise uthando okuzoletha injabulo. ARIES: Mar 21 – Apr 20.
U-2017 uzokuza nenhlanhla emsebenzini kodwa kumele usebenze kanzima futhi unawo amandla okwenza njalo. Umsebenzi wakho uyakufakazela lokho. Kwezamabhizinisi kuzoba wuginqigonqo kodwa ngasekupheleni konyaka izinto zizokuchuma. Kwezothando, maningi amathuba okuthi isithandwa sakho sikucele umshado, ngaphambi kwalokhu kuzoqale kube nongaboni ngasolinye. Zama ukugwema impikiswano ngoba ingona izinto. TAURUS: April 21-May 20
UZOHLANGANA nabantu abaphezulu abakwazi ukushintsha indlela abantu abenza ngayo izinto. Abanye babo bazobe benemibono engaphusile. Ngenxa yamandla onawo ungakwazi ukwenza isinqumo nawe esingakumangaza. Kungenzeka ube nenkinga yokufunda kodwa usenalo ithuba lokuthi ubuye uqhubeke. Qaphela ungazihlanganisi nabantu abahlebayo emsebenzini. Kuzoba nokubekezelelana nokwazana kangcono phakathi kwakho nesithandwa sakho. Kungenzeka futhi uzitholele umaqondana omusha. GEMINI: May 21- June 22
U-2017 uzoba ngunyaka ozoveza amathuba amahle kodwa azobe ehambisana nezinselelo. Kumele uvule amehlo ukuze ukwazi ukuphendla indlela yakho ngokuzethemba. Ngasohlangothini lomsebenzi nasebhizinisini uzothola ithuba lokuveza ikhono lakho. Kungenzeka futhi uthole umsebenzi omusha osezingeni elingaphezulu kwaleli okulo. Ekuqaleni konyaka izinto zizobe zihamba kahle kakhulu phakathi kwakho nesithandwa sakho. Uma ungenamuntu kungenzeka kubuye esenehlukana naye ezcela ukuthi nilungise izinto. Ngasekupheleni konyaka kungenzeka loyo ozogcina umkhethile
nishade naye. CANCER: Jun 22-July 23
KUZOBA nezindlela ezintsha ozoziqala kodwa zonke ngeke zidonse isikhathi eside. Uzoba nomuzwa wokuzisondelanisa nokholo okuzoba nemiphumela emihle. Wena nowakwakho nizochitha isikhathi esiningi ndawonye okungaphezulu kwalokho okujwayelekile. Uqaphele ngoba amahlazo akho angase avele emphakathini. Kuzoba nezinkinga emsebenzini okuzobeka nomsebenzi wakho engcupheni kanti uma ubekezela kuzoba nomvuzo omuhle. LEO: July- 23-Aug 24
UZOBA nenkinga yokuqhuba izifundo zakho kulo nyaka. Emsebenzini gwema ukuhleba ngoba kuzokudalela inkinga. Abafowenu nodadewethu bazohlale beseduze kwakho kodwa ukunganaki izinto ezibalulekile kungabephula umoya bagcine nabo bengasakunaki. Kuzoba nokungaboni ngasolinye phakathi kwakho nesithandwa sakho kodwa ngenxa yothando olunesisekelo esiqinile konke lokhu kuzodlula ngokushesha. VIRGO: Aug 24-Sept 23
KUZOKUHAMBELA kahle emkhakheni eminingi yempilo. Izinqumo zakho kungenzeka zithinte umsebenzi wakho nezinye izigaba zempilo. Impilo kamama wakho izoba ntekenteke, ekayihlo yona izobe isesimeni esihle. Oyedwa kowelamana nabo uzodinga usizo lwakho ebhekene nenselelo yokufunda. Kwezothando, kuzoba nezinselelo kakhulukazi njengoba niqhelelene ngenxa yomsebenzi. Gwema ukuba nenhliziyo encane zama ukuqonda indlela isithandwa sakho esisebenza ngayo. LIBRA: Sept 23-Oct 23
INDLELA odalwe ngayo izokusiza ukuthi ukwazi ukwenza zonke izinto zakho, kungabi khona okusilele ngemuva. Ngasohlangothini lomsebenzi namabhizinisi kuzoba noshintsho olukhulu. Okumele ukwenze ukuyeka ukuvilapha okungenzeka ukuthi yibona obukunqindayo kwezinye izinto. Ungabuye uphundulwe amathuba amahle obungawathola.
Uzothi uqala nje unyaka ube kukuhambele kahle kwezothando. Indlela enihlale nindawonye ngayo izoqinisa ubudlelwane benu. Uma kuba nokungaboni ngaso linye lolu daba luphatheni ngesinono. Akulindelekile ukuthi uthole umshado ekuqaleni kwalo nyaka kodwa uma usuyophela kukhona okukhombisa ukuthi kungenzeka ube nenhlanhla. SCORPIO: Oct 23-Nov 23
UMTHWALO obulokhu usemahlombe akho eminyekeni eminingi eyedlule uzokwehla. Izeluleko ozozithola kumfowenu noma udadewenu zinake ngoba zizokusiza. Kumele usebenze kanzima ngesikhathi usazama ukuthola indlela esheshayo yokwenza umsebenzi wakho. Zikhiphe nesithandwa sakho nishaywe wumoya nihambele nemicimbi yomndeni neyabangani. Lokhu kungaholela ekutheni nigcine nibona ukuthi niyadingana kakhulu kunalo enikucabangayo okungaphetha ngomshado. SAGITTARIUS: Nov 23- Dec 22 ZISUKA amagqozo nje uzoba nempilo enhle futhi le obuhlale uyilangazelela yonke iminyaka ngenxa yokuthi uthathe isinqumo esihle. Ukusebenza ngobuqotho kungaholela ekutheni uthole umsebenzi ongcono. Ngakwezothando kuzomele ucophelele ngoba kungase kube nokuxabana phakathi kwakho nesithandwa sakho. Uma wenze njalo uzoqhubeka nokuba nobudlelwano obuhle nesithandwa sakho. Ezinyangeni zokugcina zonyaka, lizokwenyuka izinga lenu lokuthandana, alizogcina nje ngokuthi nithande nizijabulise ndawonye. Uma ufuna umshado kumele ucabange nokubheka engxenye.